Soomaaliya oo farogelin ku eedeysay Kenya
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay dowladda Kenya inay farogelin siyaasadeed iyo mid amni ka waddo gudaha Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu yiri “Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya (DFS) waxay ka xuntahay faragelinta siyaasadeed iyo mida amni ee Dowlada Kenya ay ka wado gudaha Soomaaliya.”
Soomaaliya ayaa ka digtay “in farogelinta” Kenya aysan u wanaagsanayn xiriirka labada dal iyo xal u helida mushkiladaha gobolka ee ay ka mid tahay ladagaalanka argagixisada.
Soomaaliya ayaa sidoo kale ugu baaqday Kenya inaysan ciidankeeda jooga Soomaaliya u adeegsan faro-gelinta arrimaha gudaha.
“Sida ay qabaan xeerarka caalamiga ah oo ay ku jiraan kuwa Golaha Amniga iyo African Union ee Ciidamada AMISOM ku joogaan dalka Soomaaliya, waa in aan Dawladda Kenya u adeegsan Ciidamadeeda ku jooga Soomaaliya magaca dalada AMISOM faragelinta arimaha siyaasada gudaha iyo khalkhal-gelinta amniga gudaha ee Soomaaliya,” ayaa lagu yiri qoraalka.
“DFS waxay mar walba raadinaysaa daris wanaag, ixtiraam iyo nabad ku wada noolaasho, waxayna shacabkeeda u balan qaadaysaa ineysan aqbali doonin faraglin iyo khalkhal abuuris, taasoo aysan ku jirin maslaxada gobolka iyo nolosha shucuubta dagta.”
Kenya weli kama jawaabin eedeynta Soomaaliya, waan idinla soo socodsiin doonnaa marka ay sidaas sameyso.